Hospital ezilahlwayo amakhethini, zilahliwe amakhethini - Tianfeng
Izixhobo zeNdalo esingqongileyo yakwaSuzhou Tianfeng, eyasekwa ngo-2008, lishishini elibanzi
ikhethini ezikumgangatho ophezulu ezilahlwayo ezinokubakho kuphando kunye nophuhliso, uyilo kunye nemveliso.
Iimveliso zethu zibandakanya amakhethini alahlwayo asemgangathweni, amalengalenga amakhethini kunye namakhethini aprintiweyo.
Ikhethini yenziwe nge-100% ye-polypropylene enezona mpembelelo zisezantsi kwezendalo kuyo nayiphi na into-eyenziweyo okanye eguqulweyo.
Amakhethini alahlwayo ezonyango
Amakhethini ethu anokulahlwa aphucula indlela izibhedlele ezilawula ngayo iinkqubo zazo zokucoca nokubonakala kwazo.
Ezilahlwayo umnatha amakhethini
Amagwegwe alahlwayo amakhethini
Suzhou Tianfeng Environmental Materials Technology, eyasekwa ngo-2008, i lweshishini olubanzi iingcali ezikumgangatho ophezulu esibhedlele amakhethini ezilahlwayo kunye nophando kunye nophuhliso, uyilo kunye nemveliso production. Zonke zineehaksi kunye neleyibheli yobushushu eqhotyoshelweyo
Isakhelo sethu esitsha esilahlayo amalengalenga ayilelwe ukubuyisela amakhethini akhoyo anokuphinda asebenze kwaye ahlambe kunye nokonga iindleko kunye nolawulo losulelo oluphuculweyo.
Siyingcali yolawulo losuleleko olusebenzayo, isibulala-zintsholongwane kunye nesibhedlele esigcina ilangatye.
Amava eminyaka eli-13 + yokuvelisa amakhethini e-cubicle alahlwayo
Kuqinisekisiwe ukuhlangabezana nemigangatho yamanye amazwe ye-anti-bacterial kunye nelangatye nekudodobalisa
Ukulondolozwa kwexabiso elibalulekileyo kunye nolawulo losulelo oluphuculweyo
Imveliso yemveliso yokulwa intsholongwane ezimeleyo
Yenziwe nge-100% ye-polypropylene yengubo engalukwanga